Antony 5 TSY mampakatra ny mozika na horonan-tsarinao amin'ny antoko fahatelo | Martech Zone
Antony 5 TSY mampakatra ny mozika na horonan-tsarinao amin'ny antoko fahatelo
Alahady, Septambra 24, 2006 Sabotsy, Martsa 31, 2007 Douglas Karr
Raha mampakatra horonantsary ao amin'ny Youtube ianao ary Youtube dia mahazo azy an-tapitrisany… nametraka vola tao am-paosiny fotsiny ianao! Fa maninona no hataonao izany?
Youtube - ianao izao dia manome alalana Youtube an'izao tontolo izao, tsy an-tsokosoko, tsy misy mpanjaka, tsy azo zahana ary azo ampitaina hampiasa, hamerina, hizara, hanomana sanganasa derivative, hampiseho ary hanatanteraka ny Fandefasan'ny Mpampiasa mifandraika amin'ny tranokala Youtube sy Youtube (ary ny orinasany mandimby azy), ao anatin'izany ny tsy ferana amin'ny fampiroboroboana sy fizarana ampahany na amin'ny tranokala Youtube (sy ireo sanganasa derivative azy) amin'ny endrika haino aman-jery rehetra sy amin'ny alàlan'ny fantsom-baovao rehetra.
Google - ianao no mibaiko sy manome alalana an'i Google, ary manome Google tsy manan-kery, tsy an-kanavaka manokana sy fahazoan-dàlana ho, mampiantrano, cache, zotra, mandefa, mitahiry, mandika, manova, mizara, manao, mampiseho, manavao, mamaky, mitanisa, manamora ny fivarotana na fanofana kopian'ny, famakafakana ary famoronana algorithma mifototra amin'ny Atiny Alalana mba (i) hampiantranoana ny Atiny Voatendry ao amin'ny lohamilin'i Google, (ii) manondro ny atiny nahazo alalana; (iii) mampiseho, manatanteraka ary mizara ny atiny nahazo alalana
MySpace - Amin'ny fampisehoana na famoahana ("fandefasana") izay atiny rehetra amin'ny na amin'ny alàlan'ny Serivisy MySpace, dia omenao alalana amin'ny MySpace.com lisansa voafetra hampiasa, hanova, hanatanteraka ampahibemaso, haneho ampahibemaso, hamerina ary hizara izany Atiny izany fotsiny amin'ny amin'ny alàlan'ny MySpace Services.
FLURL - Manome fahazoan-dàlana tsy miankina amin'ny orinasa ianao hamoahana, hivarotra, hivarotra, hanome alalana, hitrandrahana, ary hampiasana amin'ny fomba rehetra, ny fitaovana rehetra omena ny Serivisy, ny tranokala ary / na ampiasaina amin'ny fomba rehetra amin'ny serivisy. ao anatin'izany fa voafetra amin'ny mozika, sary, zavatra vita an-tsoratra, zava-kanto, anarana, lohateny sy logo, marika famantarana, ary fananana ara-tsaina hafa. Tsy hahazo onitra amin'ny fampidirana na fitaovana hafa omena ny Serivisy ianao.
DropShots - DropShots dia, raha tsy misy fanamarihana hafa, dia tompon'ny zon'ny mpamorona sy zotram-pifandraisana rehetra ao amin'ny Serivisy sy ny ao anatiny. Tsy azonao atao ny mamoaka, mizara, manaisotra, mampiasa indray na mamerina ny atiny rehetra amin'ny endrika fitaovana (ao anatin'izany ny fanaovana photocopie na ny fitehirizana azy amin'ny fitaovana rehetra amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika) ankoatry ny fahazoan-dàlana voafetra voafaritra voalaza ao amin'ny fampandrenesana momba ny zon'ny mpamorona.
Atsaharo ny fanomezana maimaim-poana ny atiny! Mampanantena ireo orinasa lehibe fa tsy hampiasa ny atiny mihoatra ny fizarana amin'ny tranokala. Ireo orinasa lehibe HANANA manome onitra raha mampiasa ny atiny ivelan'ny tranokala izy ireo. Ary ireo orinasa lehibe dia hamela anao hanohy HITANAO ny atiny - na dia avelanao ny serivisin'izy ireo aza.
Pejy famakiana nohavaozina
Sep 24, 2006 ao amin'ny 9: PM PM
Lahatsoratra tsara Inona ny eritreritrao momba ny Revver.com, izay mizara ny vola azo avy amin'ny atiny miaraka aminao?
Sep 24, 2006 ao amin'ny 10: PM PM
Mahazo 500 script diso amin'ny tranokalan'izy ireo aho…
Sep 25, 2006 ao amin'ny 2: PM PM
Lahatsoratra tena tsara, Doug.
Indrindra ny fiheverana fa na dia ny fampiantranoana haino aman-jery manan-karena aza dia tsy handany vola intsony ary tongotra… (Eto aho dia afaka manome soso-kevitra MediaTemple nifindra toerana aho rehefa avy nahatoky tamin'ny mpamatsy mpizara voalohany ahy nandritra ny 5 taona. Manana fahafaham-po be dia be amin'ny mpanjifa izy ireo, ary gaga aho tamin'ny hafainganam-pandehan'izy ireo mamaly amin'ny mailaka mpanjifa tsy geeky. (Ary tsia, tsy nampiasain'izy ireo aho…)
Antony iray hafa tsy hampiantranoanao ny atiny amin'ny antoko faha-3 dia ny, tsy fantatrao mihitsy ny fomba nanovan'izy ireo ny politikany amin'ny ho avy - eny, na tsy fantatrao mihitsy ny fanovanao ny anao… (Alao an-tsaina hoe nanao horonan-tsary / hira mahafinaritra napetrakao ianao an-tserasera, ary misy andrim-barotra sasany te-hividy izany aminao - tsy afaka mivarotra izany ianao raha vao manaiky ny fepetra napetrak'i Doug…)
Noho izany: mampiantrano tena. Mba mifalia. Mahaiza mamorona.
Ary amin'ny maha plug-ko ahy, ireto misy video vitsivitsy notifiriko.
Mar 24, 2007 amin'ny 11: 03 AM
Te-hanamarika haingana ny lahatsoratrao fotsiny aho. Misaotra anao noho ny famporisihana ireo mpanakanto mihevitra ny handefa ny haino aman-jery any amin'ny mpampiantrano / mpaninjara antoko fahatelo. Betsaka tokoa ny olona mamorona no tsy mihevitra ny raharaham-barotra sy ny lafiny ara-dalàna amin'ny indostrian'ny fialamboly sy ny fananana ara-tsaina, ary mety ho mora ho an'ny olona mpanararaotra izany - na ho mpitantana, na agents, na firaketana firaketana (lehibe na kely), na mpandraharaha tranokala - ny araraoty ireo izay tsy manana haitraitra na fahatakarana fototra momba ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona any Etazonia.
Voalaza fa, ny mpitory sy ny mpaninjara antoko fahatelo dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mitaky ny hanomezan'ny tompon'ny zon'ny mpamorona copyright ny antoko fahatelo tsy miankina fahazoan-dàlana amin'ny zon'ny tompon'ny zon'ny mpamorona (ny mpanakanto), inter aliany zo hamerina, hizara ary hampiseho ampahibemaso ireo fitaovana manana zon'ny mpamorona. Raha tsy izany, ny mpanonta antoko fahatelo dia iharan'ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona. Izany no antony itovizan'ny fiteny amin'ireo fifanarahana fampiasana etsy ambony ireo (ary azo antoka fa tsy misy ankanavaka ny tranokalanay).
Raha misy mpitady antoko fahatelo mitady manokana fahazoan-dàlana, avy eo dia ahiahiana, ary mety tokony hialana ny serivisy, arakaraka ny toe-javatra.
Spirit of Radio LLC
Apr 23, 2007 ao amin'ny 4: PM PM
Ahoana no fandraisan'ny olona ny horonantsary na podcast azy manokana? Manana horonantsary ao amin'ny tranonkalako aho saingy ahoana no fomba hahitan'ny besinimaro azy?
Apr 26, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
Azafady mba lazao anay hoe iza ireo orinasa lehibe lazainao amin'ny faran'ny lahatsoratrao! Avelanao hahantona aho! Te-hihazona ny zoko rehetra amin'ny mozika aho, nefa voatery mampiasa medium ho an'ny zava-misy tsotra izay misy ny mpijery.
Mieritreritra aho fa ny tranokala maritrano ara-tsosialy, ny REAL, toy ny trib.net dia antony masaka hanaparitahana ny haino aman-jery voafehy. Amin'izay fotoana izay, ny iray manokana dia tsy manana fahaiza-manao fampiantranoana mozika, kanefa mamela ny rohy tafiditra amin'ny tranokala toy ny YouTube izany. Manana kaonty MySpace aho izay mifamatotra amin'ny SnowCap, ahafahako mametraka ny vidin'ny hira, izay nomen'izy ireo marika avy eo. Vao avy nilalao azy io aho ary mila fampisehoana bebe kokoa, noho izany dia mila mieritreritra ny hampiantrano ny asako any an-kafa aho. Ireo tranokala lehibe dia toa eo an-tampon'ny fahafaham-po ary mihodina amin'ny horonan-tsary amin'ny feo fotsiny.
Apr 26, 2007 ao amin'ny 5: PM PM
Ireo orinasam-pandraharahana lehibe rehetra dia nanitsy ny fampiasa azy ireo ary manohy manao izany hatrany. Mila famerenana maharitra izany. Mampitandrina ny olona fotsiny aho fa tsy maintsy averiny jerena ny fampiasa rehetra alohan'ny hampiakarany izay 'heverin'izy ireo' ananan'izy ireo. Halako ny mahita olona very ny zon'ny mozikany na ny lahatsariny amin'ny alàlan'ny fampidirako azy fotsiny amin'ny mpizara… izay ahafahan'ny olon-kafa manararaotra izany!
Aug 22, 2008 amin'ny 5: 53 AM
Ity misy Kiqlo mpisolo toerana hafa
Kiqlo dia tsy liana amin'ny fahazoana ny zon'ny atiny. Kiqlo mamela anao hivarotra ny atiny raha mitahiry ny zon'ny mpamorona. Azonao atao ny mampakatra azy maimaim-poana, amidio maimaim-poana ary tsy mahazo manapaka an'io i Kiqlo. Marina izany! Tsy misy Catch!
Azonao atao ny misintona, mampakatra tsy misy fidirana. Raha te hivarotra ianao dia mila miditra. Hevitra vaovao io fa ho an'ity tanjona ity indrindra.
Oct 21, 2008 amin'ny 2: 25 AM
Azafady mba ampahafantaro anay ny hevitrao momba ny Ourstage.com. Izaho sy ny vadiko dia samy mpamoron-kira ary nametraka hira vitsivitsy tao amin'ny tranonkalany izahay. Ny andro vitsivitsy voalohany dia napetraka tao amin'ny top 10 izahay ary misy aza ny isa voalohany amin'ny faritra misy anay ary rehefa afaka 4 ka hatramin'ny 5 andro dia nilatsaka ambany na afovoan'ny naoty ny hiranay rehetra ary ny fifidianana ny hiranay dia tsy manaova lick sens ho an'ny iray amintsika ?? Nambaran'izy ireo fa mijanona ho anay ny zonay rehetra ary ny fivarotana rehetra dia any amin'ny kaontinay paypal fa hatramin'izao dia mbola tsy nanao denaria mihosin-dra noho ireo hiranay nalefa izahay. Entina mitaingina azy ve isika? Novakiako tokoa ny ankamaroan'ny fifanarahana fa tsy izy rehetra. Azoko antoka fa teo amin'ny avo sy ambony ny zava-drehetra fa rehefa avy namaky ireo antony dimy nataoko dia tsy azoko antoka izany?
Misaotra anao tamin'ny bilaoginao. Mirary tontolo andro tsara ary enga anie ianao mahatsapa ny fitahian'ny fiainana sy ny fitiavana ho anao isan'andro isan'andro.
Amin'ny anarany masina,
18 Nov 2009 tamin'ny 10:13 PM
Etsy ankilany, aza mampakatra ny mozikanao na aiza na aiza ary avelao anarana anarana anarana mandritra ny androm-piainanao!
Eny, vakio hatrany ny teny sy ny fepetra (hatoky tena loatra ianao fa tsy) ary amin'ny ankabeazan'ny fotoana dia tsy fanararaotana ireo.
Heveriko fa olana ny manome kely hahazoana kely, tsy azonao antenaina ny fampiroboroboana nefa tsy manala sarona ny tenanao (azafady ny fitenenana) Izaho dia mpamoron-kira iray izay manoratra amin'ny fahitalavitra / sarimihetsika, mahavita mivelona amin'izany aho ary tsy mety mahazoa vintana any amin'ny helo raha toa ka tsy natoky ny olona tsy hanararaotra ny finoana azy ireo izay napetrako tamin'ny fanomezana ny moziko aho. (ary mbola mila manao izany foana aho, raha tsy izany dia ho maina ny asa)
Ny fanararaotana fatratra ny mozika nataoko dia ny rehefa nandefa ny fahitalavitra tamin'ny fahitalavitra ny mozika ary avy eo nivarotra tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny iTunes sns, nisy nanapa-kevitra ny hividy azy avy eo nametraka izany tamin'ny mpankafy ny fandaharana amin'ny fahitalavitra niavian'io, ho télécharger maimaim-poana.
Mahazo karama amin'ny youtube aho rehefa mandeha ny mozikako satria izany no tena fomba fiasany, tsy toy ny voalazan'ny lahatsoratra (mpikambana ao amin'ny fiarahamonim-panangonana aho izay manome antoka an'izany) PRS
Ka azafady azafady amin'ity lahatsoratra ity azafady.
Dec 4, 2009 amin'ny 12: 27 AM
Mihevitra ve ianao fa hirohotra mankamin'ny tranonkalanao ny olona any amin'ny faritra ambadika amin'ny Internet mba hijery horonan-tsary vitsivitsy? Mandeha amin'ny Youtube sy tranokala hafa ny olona satria malaza izy ireo ary mety hahita ny ao anatiny ny olona. Holazaiko fa ny 80% + tsara amin'ny mponina mampakatra dia tsy miraharaha na hampiasain'izy ireo na tsia, fantatro fa tsy mampaninona ahy izany. Azo antoka fa mahazo tratra maimaimpoana amin'ny tranokalan'izy ireo izy ireo, saingy izany no asany. Tsy hampakatra ho azy ireo ianao raha tsy mahazo hira izy ireo. Ny hany fomba fividianana tranokala sy ahazoana zon'ny mpamorona ny atiny dia raha vondrona malaza sy mamokatra horonan-tsary sy / na sary be dia be ianao. Raha tsy izany dia manandratra tandroka fotsiny ianao ary manandrana manandanja.